कसरी तपाइँको पिज्जा ... ईर ... उत्पादन बेच्नुहोस् यो अनलाइन | Martech Zone
सोमबार, फेब्रुअरी 16, 2015 बिहीबार, अक्टुबर 29, 2020 Douglas Karr
मेरो एक राम्रो साथी, जेम्स, Brozinni Pizzeria को स्वामित्वमा छ। म वरिपरि गडबड गर्न जाँदैछु - यो इमान्दारीपूर्वक हो इन्डीमा सर्वश्रेष्ठ न्यूयोर्क शैली पिज्जा। जेम्सले हामीलाई अलि धेरै नै मद्दत गरेको छ, आश्चर्यजनक ल्याउँदै इंडियानापोलिस पिज्जा ट्रक गत वर्ष एक कोष सer्कलनकर्ता र यस हप्ता आउँदै गरेको एक आगामी कार्यक्रम पूरा गर्न। बदलामा, हामी उसको लागी एक साइट डिजाइन गर्न को लागी।
जब हामी साइट डिजाइन गर्नका लागि बाहिर निस्केका थियौं, हामी जान्दछौं कि त्यहाँ केवल एउटा मात्र कुराको महत्त्व छ - खानालाई कुरा गरौं। पिज्जा तस्विरहरूका लागि उत्तम खाना हो - आश्चर्यजनक र withहरूसहित जुन तपाईलाई हेर्नु नै व्यावहारिक रूपमा गन्ध मिल्छ। नेविगेशन, साइडबार, र अन्य व्यर्थ ठाउँ भरिएको साइट भरि तपाईं छविहरू किन सानो फ्रेममा लुकाउनुहुन्छ? जेम्स र उसको टोलीसँग काम गर्दै हामीले एक अपडेट र परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेका छौं आश्चर्यजनक रेस्टुरेन्ट विषयवस्तु त्यो अत्यन्त सस्तो छ।
हामीले एउटा अनुकूलन विषयवस्तु निर्माण गर्न सक्दछौं - तर इमान्दारीपूर्वक यो प्रयासको लागि बेकम्मा छ। थिम डिजाइनरहरू केवल एक अद्भुत काम गर्दै छन् लचिलो विषयवस्तुहरू निर्माण गर्दै जुन हजारौंले बेच्छन् तर त्यो अत्यधिक अनुकूलित गर्न सकिन्छ किनकि हामीले ब्रोजिन्नीको साइटसँग गर्‍यौं। विषयवस्तु सबै सुविधाहरूको साथ आउँदछ:
फोटोशप फाईलहरू घटना मा तपाईं मूल ग्राफिक्स प्रयोग अनुकूलन गर्न चाहानुहुन्छ।
लंबन सजावट त्यो नेभिगेट गर्न रमाईलो गरीन्छ र उच्च स्तरको परिष्कारको प्रदान गर्दछ।
उत्तरदायी डिजाइन कि एक मोबाइल वा ट्याब्लेट मा तिनीहरू सुन्दर देखिन्छन् डेस्कटपमा।
सर्टकटहरू बटन, तेर्सो डिभाइडर, आइकन र स्तम्भ लेआउटको लागि अनुमति दिन्छ।
बाल विषयवस्तु यस भित्र निर्मित गर्दछ ताकि तपाईले मूल विषयवस्तुलाई अनुकूलन गर्नुपर्दैन - जुन प्राय समर्थन वा सुरक्षा रिलीजको साथ अपडेट हुन्छ।
डोमेन नेटवर्क समाधानमा होस्ट गरिएको थियो त्यसैले हामीले त्यहाँ WordPress होस्टिंगमा जाने निर्णय गरेका थियौं ... एक ठूलो गल्ती। हामी शाब्दिक थिम फाईलहरू अद्यावधिक गर्दै ब्यान्डविथबाट बाहिर थियौं! जब मैले उनीहरूको समर्थन टोलीबाट सहयोगको लागि अनुरोध गरे, तिनीहरू मलाई प्राविधिक समर्थनमा अपेल गर्न चाहन्थे र मलाई काम गर्ने घण्टामा फोन गर्न आग्रह गरे। उह।
म बुलेटलाई बिट गर्छु र साइटलाई पूर्ण होस्टिंग योजनामा ​​राख्छु, सबै छविहरू संकुचित Kraken प्रयोग गर्दै, र त्यसपछि कन्फिगर गरियो WP रकेट साइट छिटो मद्दत गर्न। हामी देख्नेछौं कि यसले केहि हप्तामा कसरी प्रदर्शन गर्छ यदि हामी निर्णय गर्नु अघि हामी यसलाई राम्रो होस्टमा सार्नु पर्छ भने।
तल लाइन: यो उत्कृष्ट विषयवस्तु र औसत होस्टिंगको साथ एक अद्वितीय साइट निर्माण गर्न गाह्रो वा महँगो थिएन। साइटले खोज, सामाजिक, र वाहक अर्डरहरूको साथ कसरी काम गर्दछ भन्ने कुराको लागि हामी अब नजर राख्नेछौं!
टैग: ब्रोजिन्नीडिजाइनवेब डिजाइनवेब साइट
जुन 22, 2015 मा 10: 22 PM
डगलस - रेस्टुरेन्ट वेबसाइट अचम्मको देखिन्छ, यद्यपि लेख शीर्षकको आधारमा म मेनुमा गएर फोटोहरूमा प्रत्येक खानाको परिकार कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्न सक्षम हुने आशा गरिरहेको थिएँ! यसको सट्टा यो "एकल प्लेटफर्म मेनु" थियो मलाई Crave.ly ले यसलाई कसरी परिवर्तन गर्न मद्दत गरिरहेको छ र रेस्टुरेन्टहरूलाई तपाईंले भन्नुभए जस्तै खाना प्रदर्शन गर्न फोटोहरू सहित अनलाइन मेनुहरू व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ भन्ने बारे तपाईंसँग कुराकानी गर्न मनपर्छ, खानालाई कुरा गर्न दिनुहोस्। !
जुन 22, 2015 मा 10: 42 PM
नमस्ते ब्रायन, त्यो धेरै राम्रो छ! हामी तिनीहरूलाई सक्रिय रूपमा मद्दत गर्दैनौं तर तपाईं सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूलाई यो मनपर्छ कि भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले उनीहरूले मागेको प्रणाली लागू गरेका छौं।